The Myth 2005 720p – Myanmar Subtitles
The Myth 2005 720p
Genre: Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy Director: Stanley Tong Actors: Bing Shao, Jackie Chan, Jianzhong Zhang, Weixing Yao Country: China, Hong Kong Released: 23 Sep 2005 Score: 6.2 Duration: 122 min Quality: Bluray 720p Years: 2005 View: 1,100
The Myth ဆိုတဲ့ဇာတျကားလေးက ကြှနျတျောတို့ ဂကျြကီခနျြး ပရိသတျတှအေားလုံးရငျထဲရောကျရှိပွီးသားဖွဈမှာပါ။
ဒီဇာတျကားထဲမှာ သီဆိုသှားခဲ့တဲ့ Endless Love သီခငျြးက ကြှနျတျောတို့ရဲ့ခဈြလှစှာဖွဈတဲ့မငျးသားတဈယောကျဖွဈတဲ့ ဂကျြကီခနျြးနဲ့
ကိုရီးယားက ရုပျရှငျသရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Kim Hee Seon နဲ့သီဆိုထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျကားလေးကို မကွိုကျတဲ့သူရှိမယျလို့မထငျပါဘူး။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလဲ Endless Love သီခငျြးနားထောငျတိုငျး ဒီဇာတျကားလေးကို
ပွနျကွညျ့ခငျြတဲ့စိတျရှိလာတာကွောငျ့မလို့ ကြှနျတျောတို့ Mmsubtitles ကနပွေီးတော့ ဘာသာပွနျပွီးတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
Quality မှုနျဝါးဝါးတှမေဟုတျပဲ 1080p 5.1CH, 720p Bluray နဲ့ခြိတျထားပေးတဲ့အတှကျကွောငျ့မလို့ ကွညျ့ရှူတဲ့ပရိသတျအပေါငျးတို့
မကျြလုံးမမှုနျစပေဲနဲ့ ကွညျကွညျလငျလငျကွညျ့လို့ရမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ဇာတျကားထဲမှာပါဝငျတဲ့သီခငျြးတှအေားလုံးကိုလဲ ဘာသာပွနျပေးထားပါတယျ။ ဇာတျကားလေးကိုအဆုံးထိကွညျ့ပေးကွဖို့လဲတိုကျတှနျးလိုပါတယျ။ အဆုံးမှာ သီခငျြးတှကေိုဘာသာပွနျပေးထားလို့ပါ။ သီခငျြးလေးကိုခံစားရငျး ကွညျ့ရှူပေးကွပါ။
ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးကတော့ တဈခါမှမကွညျ့ဖူးတဲ့သူတှအေတှကျရေးပေးတာပါ။ ကွညျ့ဖူးတဲ့သူတှကေတော့ ဘာစောငျ့နမှောလဲ Quality အမှနျ
မွနျမာစာတနျးထိုးအမှနျနဲ့ အခုပဲပွနျဒေါငျးပွီး ကွညျ့လိုကျကွတော့လေ။
ဂကျြချလို့ချေါတဲ့လူတဈယောကျဟာ တိုကျပှဲတှထေဲမှာ စဈတိုကျနရေတဲ့ စဈသူကွီးအဖွဈ အိပျမကျကိုမကွာခဏမွငျမကျပါတယျ။ သူဘယျလိုအဲ့အိပျမကျကိုမကျရလဲဆိုတဲ့အကွောငျးကို
သူကိုယျတိုငျလဲမသိပါဘူး။ တဈနမှေ့ာတော့ နိုငျငံခွားကသူ့သူငယျခငျြးတဈယောကျ ရောကျလာပွီး သူ့ကိုလပေျေါမြောပါနတေဲ့ကြောကျတုံးကိုစမျးသပျသုတသေနလုပျခငျြတာကွောငျ့မလို့
အဖျောအနနေဲ့ လာချေါပါတယျ။ ဂကျြချအနနေဲ့ သူ့သူငယျခငျြးနဲ့လိုကျပွီးတော့ လပေျေါမြောပါတဲ့ကြောကျတုံးတှအေကွောငျးကို သုတသေနလုပျရငျး သူဘာလို့စဈသူကွီးတဈယောကျအဖွဈ
တိုကျပှဲတှမှော တိုကျရသလဲဆိုတဲ့ ပဟဠေိကို ဘယျလိုအဖွရှောသှားမလဲ….
Translated And Encoded By Lin Htike Aung
Rotten Tomatoes – 55%
Genres: Action | Adventure | Comedy | Drama | Fantasy
Download Type – Myandrive, Megaup, Filerocks, Openload
Download size – 1080p 5.1CH (1.4GB), 720p Bluray(1GB)
The Myth ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးက ကျွန်တော်တို့ ဂျက်ကီချန်း ပရိသတ်တွေအားလုံးရင်ထဲရောက်ရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ သီဆိုသွားခဲ့တဲ့ Endless Love သီချင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်လှစွာဖြစ်တဲ့မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျက်ကီချန်းနဲ့
ကိုရီးယားက ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kim Hee Seon နဲ့သီဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားလေးကို မကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ Endless Love သီချင်းနားထောင်တိုင်း ဒီဇာတ်ကားလေးကို
ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ရှိလာတာကြောင့်မလို့ ကျွန်တော်တို့ Mmsubtitles ကနေပြီးတော့ ဘာသာပြန်ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Quality မှုန်ဝါးဝါးတွေမဟုတ်ပဲ 1080p 5.1CH, 720p Bluray နဲ့ချိတ်ထားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ကြည့်ရှူတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းတို့
မျက်လုံးမမှုန်စေပဲနဲ့ ကြည်ကြည်လင်လင်ကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားထဲမှာပါဝင်တဲ့သီချင်းတွေအားလုံးကိုလဲ ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။ ဇာတ်ကားလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြဖို့လဲတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ အဆုံးမှာ သီချင်းတွေကိုဘာသာပြန်ပေးထားလို့ပါ။ သီချင်းလေးကိုခံစားရင်း ကြည့်ရှူပေးကြပါ။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ တစ်ခါမှမကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေအတွက်ရေးပေးတာပါ။ ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေကတော့ ဘာစောင့်နေမှာလဲ Quality အမှန်
မြန်မာစာတန်းထိုးအမှန်နဲ့ အခုပဲပြန်ဒေါင်းပြီး ကြည့်လိုက်ကြတော့လေ။
ဂျက်ခ်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ တိုက်ပွဲတွေထဲမှာ စစ်တိုက်နေရတဲ့ စစ်သူကြီးအဖြစ် အိပ်မက်ကိုမကြာခဏမြင်မက်ပါတယ်။ သူဘယ်လိုအဲ့အိပ်မက်ကိုမက်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို
သူကိုယ်တိုင်လဲမသိပါဘူး။ တစ်နေ့မှာတော့ နိုင်ငံခြားကသူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး သူ့ကိုလေပေါ်မျောပါနေတဲ့ကျောက်တုံးကိုစမ်းသပ်သုတေသနလုပ်ချင်တာကြောင့်မလို့
အဖော်အနေနဲ့ လာခေါ်ပါတယ်။ ဂျက်ခ်အနေနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ လေပေါ်မျောပါတဲ့ကျောက်တုံးတွေအကြောင်းကို သုတေသနလုပ်ရင်း သူဘာလို့စစ်သူကြီးတစ်ယောက်အဖြစ်
တိုက်ပွဲတွေမှာ တိုက်ရသလဲဆိုတဲ့ ပဟေဠိကို ဘယ်လိုအဖြေရှာသွားမလဲ….
Myandrive.com Myanmar 720p
(1GB) Download Megaup.net Myanmar 720p
(1GB) Download Filerocks.pw Myanmar 720p
(1GB) Download Openload.co Myanmar 720p
#The Myth 2005 720p #Download The Myth 2005 720p Full Movie #Free The Myth 2005 720p Download
One response to “The Myth 2005 720p”
Skin Traffik AKA A Hitman in London (2015)
Game of Thrones 2014 (Season-4)